Microsoft chọrọ ịtọhapụ Edge Chromium na Linux ma chọọ enyemaka gị | Site na Linux
Microsoft Edge maka Linux ọ dịbeghị nnukwu nzọụkwụ ka ọ bụrụ eziokwu.
Sean Larkin, onye na-arụ ọrụ na mmepe Edge na Microsoft, kwuru na ndị otu ya na-arụ ọrụ na ihe achọrọ iji weta Edge na Linux, mana ọ chọrọ obere enyemaka iji mee nke ahụ.
Maka nke a, ebidola nyocha ịjụ ndị ọrụ Linux niile ihe ha chọrọ site na ihe nchọgharị.
N'ezie, enweghi nkwa na Edge maka Linux na-abịa. Ndị otu Edge na-ajụkarị ihe ndị mmepe chọrọ, mana ha anaghị ekwe nkwa ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ n’echiche inwe Edge na Ubuntu ma ọ bụ nkesa Linux ọzọ juru gị anya, ekwesighi. ka ịmalite ihe nchọgharị ahụ dabeere na Chromium na Chromium nwere nkwado obe. Vivaldi, Opera na Google Chrome jiri ya.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara Visual Studio Code na Powershell maka Linux n'oge na-adịbeghị anya, yabụ Edge ga-abịa n'oge na-adịghị anya.
N'ezie, Ọ bụ otu ihe maka Microsoft ịmalite Edge maka Linux na nke ọzọ maka ndị ọrụ iji kpebie iji ya. O yighị ka nkesa ọ bụla ga-ahọrọ iweta Edge site na ndabara, Ọzọkwa, Linux bụ ndabara ihe mepere emepe na ndị ọrụ nwere ọtụtụ nhọrọ ma nwee ike ikpebi ịghara ibudata ma ọ bụ wụnye ihe nchọgharị ahụ.
N'ikwu ya, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Edge maka Linux ị nwere ike ịza nyocha ahụ site na iji njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Microsoft chọrọ ịtọhapụ Edge Chromium na Linux ma chọọ enyemaka gị
Cloudflare sonyere na ntinye iji tinye nkwado HTTP / 3 na ọrụ ya